Mushroom ruomba - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Makirimu37 maminitsi4 vanhu
Ndakaedza kirimu iyi netray yetowa howa yandaive nayo kumba uye ndaizvida chaizvo. Ndakapa iyo yekubheka yekubata yega nekuwedzera iyo kirimu kirimu kirimu uye chazove chikafu chedu chenguva dzose kudya kwemanheru. Iyo yakanaka "yakajeka" nzira yekudya.
Iyi kamukira inogona kuitwa zvakaenzana pamwe howa. Iko kunhuvira kunosiyana zvishoma asi mune chero mamiriro acho kunonaka kwazvo uye vanasikana vangu vanodya vese vari vaviri vakafara. Zviri nyore kugadzirira uye ndizvo imwe nzira yekudya muriwo.
Iyi kirimu kamukira akaitika kwandiri shamwari yangu Eva. Isu tanga tiri shamwari kubvira vasikana vedu pavakabatana nesu patakange tisina kana mwedzi, mukudzidzira kwavo kwechecheche kosi uye kusangana kwehupenyu, takave nemusikana wechipiri zvakanyanya kana zvishoma panguva imwechete uye kana zvaive zvisina kukwana, vanasikana vedu vane mazita akafanana !!
Saka nhasi ndinoda natsa nzira iyi kwaari, yenguva dzose dzaanondikweretesa ruoko muhupenyu hunonetsa uhu hwandinorarama. Ndatenda wakanaka!
1 Mushroom cream
Iwe unogona zvakare kugadzirira kirimu iyi nehowa.
Kubika nguva: 37M
Nguva yakazara: 37M
400 g howa kana champignon
1 yemuriwo stock cube
40 g yemamwe maorivhi emhandara emafuta
175 g yechiedza Puleva kirimu kana yekubikisa kirimu
500 g yemvura
Isu tinoisa hanyanisi, maekisi, gariki uye howa mugirazi. Takabvarura 5 masekondi kumhanya 6.
Isu tinodzikisa zvakasara zvemadziro nerubatsiro rweiyo spatula. Isu tinowedzera mafuta uye chirongwa Maminitsi manomwe, pa8º, kumhanya 100.
Wedzera mvura, cube yemastock uye 1/2 teaspoon yemunyu. Isu tinoronga Maminetsi manomwe, tembiricha yevaroma, kumhanya 25.
Mushure memaminetsi mashanu ekutanga, tinobvisa kapu uye nekuisa tswanda.
Kana tapedza tinowedzera kirimu kirimu, tichichengetera mapunipuni mashoma ekushongedza uye kuronga 1 miniti, 90º, kumhanya 4.
Isu tinodzikisa tembiricha yegirazi uye nekukuya Maminetsi maviri anofambira mberi kumhanya 2-5.
Isu tinoshumira uye tinoshongedza nedrizi yemukrimu yataive tachengeta.
Mamwe mashoko - Kirimu yemuto wehowa
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Celiac, Salads uye Miriwo, Nyore, Zai risingashiviriri, Asingasviki 1 awa, Soup uye mafuta
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Special Recipes » Celiac » Mushroom cream
Akanaka sei aya akareruka mapikicha ezve kudya kumba.
Ndinoziva zvekudya kwemanheru manheru. Ndatenda.
Ndinovimba Perez akadaro
Handina kuyedza kupisa howa, asi zvakanaka kwazvo, saka kuti ireruke zvishoma, ndinoisa hafu yemukaka uye hafu yekirimu.
Pindura Esperanza Pérez
Inonaka pachokwadi !!
Asi pasina kirimu, zvichave zvakafanana here?
Ini handidi kuwedzera icho, chokwadi, asi kunyangwe chiri chidiki, chinogara chiri kirimu, uye ndogadzira chimwe chinhu uye kirimu, ndinogadzira dhizeti nekirimu…. AAAAHHHH cholesterol zvinangwa !! LOL…
Wedzera akati wandei wechiedza chezi uye zvinogona zvakare kuve zvinonaka.
Kupfuma sei !!! Unogona here kushandura kirimu yechimwe chinhu chakareruka kunge chezi ??? Ini ndinoishandisa mune mamwe makirimu saka pamwe mune ino pane kirimu ...
Ehe Laura, chinja icho chinotaridzika zvakanaka.
Iwe unowedzera riini mariki? Ini ndinofungidzira nehanyanisi kana chiri chinhu chimwe chete pane chimwe? Ndatenda
Rocio inowedzerwa pamwe nehanyanisi. Kutenda nekupindura, zvakange zvandipfuura.
Pakus, Simbe Blog akadaro
Ndinoida sei. Ini ndichangobva kuiburitsa izvozvi paDirecto al Paladar, iri nzira yandinofarira yakawanda, yakajeka uye inogara ichinaka. Kutsvoda
Pindura Pakus, Simbe Blog
Ichokwadi ndechekuti rakapfuma kwazvo. Ini ndanga ndisingazvizive, kusvikira shamwari iyi yazvipfuudza kwandiri uye ikozvino ndinoigadzirira kazhinji. Kutsvoda
JUAN MANUEL ANOEDZESA TORRES akadaro
Mhoroi, nguva pfupi yadarika ini nemukadzi wangu takatenga ruoko rwechipiri TM 21, ndakanyoresa uye munonditumira mabikirwo kuemail yangu nguva dzose. Ndinoda kuziva kana akagadzirirwa iyo TM 2 kana yeiyo TM 21. Uye kana paine chero musiyano munguva, tembiricha kana kumhanya. Ndatenda zvikuru pamberi
Pindura kuna JUAN MANUEL REYES TORRES
Carmen revilla akadaro
Mwaka uno wezhizha takatenga iyo TM-31, takaitora pazororo uye takava nenguva yakanaka tichigadzira mabikirwo, kunze kwekudya zvakanaka.
Zvino ini ndawana peji ino uye ndichatanga kuyedza nemuchina.
Kutanga ndinofanira kukubvunza mubvunzo. Mune mamwe mabikirwo, nyama, hove, muto wemuriwo mahwendefa anowedzerwa… Ini ndinowanzo shandisa muto wemvura (chimwe chezvidhinha izvo zvinotengeswa zvakagadzirirwa), piritsi ringaenzana nemuto wakadii?
Pindura kuna Carmen Revilla
Carmen, ini handizive chaizvo kuti piritsi rakaenzana sei nemuto. Mahwendefa aya anowedzerwa pachinzvimbo chemunyu kunatsiridza kudya kwedu.
Ndakagadzira chikafu ichi nezuro husiku, piritsi raive muto wenyama nekuti raive risina muriwo.
Zvainaka !!! kutenda kuzhinji!
Pindura kune montsekit
Zvinongonaka chete !!!!! Ndakachinjisa hwowa hwehowa hutsva uye mamwe ese mabikirwo aive akafanana. Ini ndaive nevanhu vandaidya kumba vasina kunyanya kuoma uye vaisiya ndiro dzakachena zvekuti dzaisatombogezwa! Ndiri kuzogadzira iyi recipe yakawanda !!!!
shongwe yemakomba akadaro
Mhoroi, ndiri kugadzira mabikirwo izvozvi uye ndinofunga ndakateedzera iyi nzira kare kare uye zvimisanganiswa zvaive leek, asi pandakanga ndichiverenga kamukira handina kutaura kuti ndiwedzere riini, handina kuisa iyo uye ini handizive kuti zvichamira sei ... Ndinovimba yakanaka futi, yakadai Kamwe, zviri nyore here kudzora hunhu hwehowa mushure mekuwedzera kirimu nemukaka mudiki? Tichaona kuti zvinonaka sei: -)
Pindura pambiru yemakomba
Pilar, maekisi anowedzerwa mudanho rekutanga, pamwe nehanyanisi, gariki uye howa.
Ndichangopedza kugadzira mabikirwo asina maekisi uye iyi zvakare yeFINGER-LUCK, ndinokutendai zvikuru nezveresipi, nguva inotevera ndichaedza maekisi.
Bravo Pilar !!… Ini ndinoda vanhu vanozvigadzirira yavo pachavo yekubikisa !!
Izvo zvinoshandiswa kune vanhu vangani ivo? Ndiri kuzoigadzira manheru ano kudya kwemanheru, ndichakuudza nezvazvo 🙂
Pindura kuna Judith
Mhoro Judith, ndeye vanhu vana, vangangoita.
Chokwadi ndechekuti ndanga ndichiona bhurogu yako kwenguva yakareba, asi ndakanga ndisati ndambotanga kugadzira chero nzira yekubika, kusvika vhiki ino pandakagadzira kirimu yehowa uye murume wangu anoti zvaive zvakanaka, ndinokutendai zvikuru nekutipa mazano ekugadzira madhishi anonaka uye nekukurumidza.
Jesu Ignacio Villalba akadaro
Akapfuma kwazvo. Ndatenda
Pindura Jesús Ignacio Villalba
Ndatenda Jesu! Isu tinofara zvikuru kuti makazvifarira. Kumbundira.
Zvinonaka! Ini zvakare ndakachengetera angana kana mashanu howa, ndokucheka kuita zvidimbu zvidiki, ndikavamutsira mupani kusvikira vayanikwa uye vakawedzera kirimu kadiki webharisamu vhiniga. Pakupera ndakaiwedzera kukirimu… mmmmmm… zvisingaite !!
Pindura kuna Albus
Hukuru! Ndinokutendai zvikuru neshoko renyu. 🙂
Kana ikagadzirwa nehwahwa hwakagwamba nechando, vanoburitsa mvura yakawanda uye hanyanisi nemaeekisi hazvina kuomeswa. Ini ndinofunga zvinokurudzirwa kutanga sadza hanyanisi nemaeeks kwemaminetsi mashoma wobva wawedzera howa, wakadiridzwa woisa zvese kumashure maminetsi mashoma usati wawedzera mvura uye uchienderera mberi nehurongwa hwese.
Gluten-isina huku uye zucchini lasagna
Mbatatisi, karoti uye muto webhinzi munyoro